Inona no Vaovao ao amin'ny AutoCAD, ArcGIS, ary Global Mapper - Geofumadas
Aogositra, 2012 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana
ArcGIS Plugin ho an'ny AutoCAD
Ny ESRI dia namorona fitaovana iray hampahafantarana ny angona ArcGIS amin'ny AutoCAD, izay mihantona toy ny takelaka vaovao ao amin'ny Ribbon ary tsy mila manana lisansa ArcGIS na programa natsangana.
Izy io dia miasa miaraka amin'ny kinova AutoCAD 2010 ka hatramin'ny AutoCAD 2012, tsy nilaza na inona na inona momba ny AutoCAD 2013. Ho an'ny kinova 2009 na taloha dia ilaina ny Build 200 Service Pack 1.
Aza mientanentana loatra, satria tsy mamaky sosona mahazatra toy ny WMS, WFS, avelao ny MXD na ESRI Geodatabase. Ny zavatra novakiany dia angona natolotra tamin'ny alàlan'ny ArcGIS Server, na amin'ny serivisy tambajotra eo an-toerana, amin'ny Internet, ary koa amin'ny sosona an-tserasera ArcGIS. Ho antsika izay nandinika ny elanelana misy eo amin'ny CAD sy GIS, dia ekenay fa dingana lehibe sy nofinofy antenaina izany, satria nifanerasera tamin'ireo sosona misy lohahevitra avy amin'ny ArcGIS i AutoCAD nefa tsy mila manafatra na manova.
Ny fiasa dia fototra, sarintany enta-mavesatra, sosona misaraka, vonoy, ahodina, ataovy mangarahara, angona momba ny tabilao. Raha voalamina ny serivisy, ny data momba ny tabila sy ny vector avy amin'ny geodatabase an'ny orinasa dia azo ovaina, saingy tsy maintsy faritana ao amin'ny GIS Server. Manaiky ny vinavina izy io, na rakitra .prj na ilay iray izay azo faritana ao amin'ny AutoCAD. Ny toetra dia azo tendrena amin'ny data CAD ary azo antoka ny mifanerasera amin'ny lisp bebe kokoa.
Manokana indrindra, na dia eo aza ny maha-fototra azy, dia toa fanandramana tsara izany, satria talohan'izay, raha tsy nampiasa AutoCAD Map na Civil3D ianao dia tsy maintsy nanova ny angona vector ho endrika dwg ary very ireo tabular.
Ary satria malalaka, tsy ratsy izany.
Download ArcGIS ho an'ny AutoCAD
Inona no havoakan'ny Global Mapper 14
Amin'ny tapaky ny volana Septambra dia hivoaka ny version of Global Mapper 14, herintaona taorian'ny nivoahan'ilay version 13 Niresaka tamin'ny fotoana izahay.
Azo antoka fa hisy lahatsoratra maromaro kokoa, saingy amin'ny zavatra navoakanay ny dikan-teny Beta izay azo alaina maimaim-poana dia izao no vaovao:
Ao amin'ny Global Mapper 13 dia nampidirin'izy ireo ny fahaizana mamaky ny ESRI Geodatabase. Ankehitriny ny ESRI ArcSDE sy ny efa mahazatra ESRI ary ny Personal Geodatabases dia azo ovaina amin'ny fomba natoraly. Toy izany koa no azo atao amin'ny angona MySQL, Oracle Spatial, ary PostGIS.
Ao amin'ny ambaratongan'ny baikon'ny baiko, dia nisy ny fanovana maro natao mba hahafahana mamolavola ny bokotra ankavanana amin'ny totozy amin'ny ankapobeny misy ny tontolon'ny fikirakirana miaraka amin'ny fahazoana fomba fanao mahazatra na mifandraika amin'ny zavatra vita.
Ao amin'ny taranaka maodelim-pahaizana nomerika, izay tena azo ampiharina, dia nanatsara ny fitantanana ny menus ny famoronana contour lines, fananganana tontonana, fametrahana koveta sy fitaovana hafa.
Ny fahaizana manatsara ny habetsaky ny tontolon'ny tany sy ny randran-tsisintany handrafetana ny faritra dia nampiana koa.
Fanohanana ireo tolotra tranonkala web (WFS) amin'ny sehatry ny mpanjifa.
Azo alefa any amin'ny CADRG / CIB, ASRP / ADRG, ary Garmin JNX ny rakitra
Ny fikarohana dia azo atao amin'ny sehatra
Azo atao izao ny manao asa ifotony izay tsy ananan'ny programa GIS matetika, toy ny fihodinana maimaimpoana, nefa tsy mila mamaritra faratampony fa amin'ny sidina toy ny atao ao amin'ny CAD. Tapaho koa ny polygons marobe avy amin'ny tsipika iray, karazana Karakarao, tsy maninona fa tsy tapaka amin'ny fiaramanidina mitovy izy ireo.
Ny kopia - paste dia azo atao tahaka ny ao amin'ny Manifold, misafidiana izay tianao, tadiavo ny tanjona kinendry, mametaka izany ary mandehana.
Tsy maintsy hojerentsika hoe inona izany, saingy miresaka momba ny vidin'ny fivarotana angon-drakitra izy ireo, mifototra amin'ny sehatry ny fanondranana entana sy famaranana.
Ary mazava ho azy, dia andrasana fa hisy endrika vaovao vaovao hitranga, ao anatin'izany ny Mapper Global dia saika tsy azo refesina, fiovana vaovao sy daty.
Avy eto dia azonao atao ny maka ny version beta, izay napetraka ho dikan-parallèle tsy misy fiantraikany amin'ny teo aloha izay efa napetraka.
Previous Post«Previous Fandefasana rakitra lehibe ho an'ny Google Drive
Next Post gvSIG Batoví, ny fizarana voalohany ny gvSIG ho an'ny Fanabeazana dia asehomanaraka »
Valiny 5 ho an'ny "Inona no Vaovao ao amin'ny AutoCAD, ArcGIS, ary Global Mapper"
jorge quintero hoy izy:
Febroary, 2014 at
Raha azonao atao, ampio aho amin'ny fametrahana ny programa.
Givanildo Sosa hoy izy:
Buenas: afaka manandrana ity rohy ity ianao http://www.youtube.com/watch?v=p0MhE3kSLIY Misy fanazavana tsara momba ny fampiasana (amin'ny teny Anglisy).
Miarahaba, miala tsiny, manana lalana na fandaharam-potoanan'i Arcgis ianao amin'ny AurtoCad 2010-2012 hatramin'ny nandefako sy nametrahako azy saingy tsy haiko ny mampiasa izany. Manantena aho fa afaka manampy ahy namana g!
Salama, afaka mandefa ireo dingana hametrahana ny mapper Global ianao amin'ny 64 byts ... misaotra